ALATSINAINY II FIAVIANA – Trinitera Malagasy
Izaia 35, 1-10 / Sal 84 / Md Lioka 5, 17-26
Ny toko 35 manontolon’Izaia no vakiana anio, izay manambara ny lalana masin’ny Tompo izay manova ny tany efitra ho zary tany lonaka maitso mavana. Izay mitebiteby fo dia ilazana fa ho avy ny tenan’izy Tompo hamonjy antsika. Famonjena manakory tokoa moa no azontsika andrandraina avy aminy? Ny vavaka fangatahana mitalaho mba hanadiovan’ny Ray ny fontsika mba hahatratrarana ny fankalazana ny Noely.
Fiadanam-pahamarinana no anarana iantsoan’Andriamanitra izay voafidiny, hoy i Baroka Mpaminany (Ba 5, 1-9). Amafisin’ny salamo 84 (salamo fandinihana) fa ny rariny ombam-piadanana hatrany: izay manao ny marina araka ny hitsiny dia hahazo fiadanam-po, satria hitsinjo avy eny amin’ny rahon’ny lanitra, ho setrin’izany, ny rariny. Izy Tompo no mpitsara ka izay te hitady ny lalan-kizorany dia mila mizotra amin’izany rariny ombam-piadanana izany.
Izany maha-mpitsara azy Tompo izany koa no ambaran’ny Evanjely amintsika. Ny Mpampiana-dalàna sy ny Farisiana dia nihevitra ho mpahay ny lalàna sy mpampihatra azy, handidy tsy araka ny hevitr’Andriamanitra fa araka izay heverin’izy ireo ho marina. Iza moa no afaka hanafaka fahotana afa-tsy Andriamanitra irery ihany? Marina izany, saingy firifiry ny olona voaheloka ho faty sy tondroi-molotra ary voahilikilika amin’ny anaran’Andriamanitra, rehefa tsy mampiasa ny fahefany araka ny sitrapon’Andriamanitra ireo nahazo fahefana hanao izany. “Taratry ny famindrampon’Andriamanitra ianao”, hoy i Papa François aminay pretra mampikonfesy.
Ny famelan-keloka eto dia ampifandraisin’i Jeosa amin’ny fahasitranan’ilay lehilahy malemy, izay voavela heloka ka afaka nandeha am-piadanana, tsy menatra ny hitondra ny fandriana hitondrana azy, fa vonona kosa hijoro ho vavolombelona hanambara ny voninahitr’Andriamanitra sy hankalaza azy.
Amin’ity herinandro ity moa isika antsoina mba haneho amin’ny fiainana ny vokatry ny fibebahana. Tsy ambom-pon’olombelona anefa izany fa vokatr’ilay fitiavana mamela heloka, fanirahana ataon’ilay manam-pahefana ka nirahina hitondra famonjena ho an’ny zanak’Andriamanitra rehetra.
Indraindray isika tsy afa-mihetsika akory ao amin’ny fahazaran-dratsy sy ny fahalemena nandamahan’ny fahotana antsika, fa raha manaiky ny iraka (anjely) alefan’Andriamanitra hitondra antsika eo anatrehany dia afaka hihaino izany baiko (fanirahana) ataon’i Jesoa izany. Ny Mpianatr’i Kristy no mandrafitra ireo iraka ireo, irahiny mba hanangona ny olona rehetra ao amin’ny vala tokana, eny fa na dia eo aza ny sakana mety hosedtaina noho ny “vahoaka”, noho ny “fombafomba sy ny mahazatra”. Mahatsiaro anefa izy ireo fa tsy misy voa afa-mitsiry amin’ny “lalana”, amin’izay andehanan’ny olona rehetra, hany ka manapa-kevitra ny hiditra avy any ambony, avy any an-tafotrano, amin’ny alalan’ny vavaka, hitondrana ny olon-drehetra eo amin’i Jesoa.
Tsy fahefana tahaka ny an’ny Farisiana sy ny Mpanora-dalàna manko ny an’i Jesoa. Ny azy ireo manko dia ny mampianatra ny manavaka ny tsara sy ny ratsy araka ny lalàna no ataony, ka manameloka na manafaka izay heveriny ho mifanaraka na tsia amin’izany. Ny an’i Jesoa koa, fahefana hitadiavana izay hitondrana ny olona rehetra amin’ny famonjena. Mpitsabo mamono ny aretina mba hamelomana ny marary izy fa tsy sanatria mpitsara mamono ny marary miaraka amin’ny aretiny. Ny famelana ny fahotana no lalana itondrany antsika kosa ao amin’ny fahasambarana amin’ny maha-zanaka. Ny fahotana manko no mahatonga antsika hizahozaho, ka hihevitra ny tenantsika ho “andriamanitra” hanao izay tiantsika atao amin’ny zavatra rehetra. Averin’i Jesoa amintsika indray ny hasina maha-zanaka, hiombonana aina amin’ilay loharanom-pahasoavana.
Inona no mora lazaina kokoa: voavela ny helokao sa mitsangana ka mandehana? Ho an’ny farisiana dia fitenenana ratsy an’Andriamanitra ny famelan-keloka ataon’i Jesoa, ho an’ny Jentily kosa, zavatra tsy vitan’ny olombelona ny manasitrana. I Jesoa tena Andriamanitra sy tena olombelona kosa, ho an’i Lioka dia sady nalema heloka no nanasitrana. Io no ataon’ny Fiangonana amin’ny fankalazana ny Batemy, mamela heloka sy manangana ho zanaka, mpitory ny voninahitr’Andriamanitra, amin’ny fandraisana an-tanana ny fiainana (fandriana natoriana) ka hizorana amin’ny lalana mitondra any an-trano, a ny an-tranon’ny Ray.